Lesi silo little cute hhayi kuphela intandokazi izingane eziningi, kodwa futhi abadala. Akenzi ukuluma, ngokushesha Ufika esetshenziswa izandla, Akudingi ukunakekelwa okukhethekile. Nokho, ngisho nokuba ekhaya izilwane ezinjalo lovely kancane, akubona bonke abacabanga, kungani ingulube Guinea - ingulube? Phela, kuyacaca ukuthi isilwane yobisi ephezulu alinaso ubuhlobo ngqo. Ngakolunye uhlangothi, kungani ingulube Guinea - kolwandle? Phela, futhi yena noma izihlobo zakhe zasendle awazi ukubhukuda kanjani. Ake ukuthola lezi zinkinga, ke kuyodingeka agcobhoze ku umlando.
Ngaphambi kokuqhubeka umbuzo, kungani ibizwa ngokuthi ingulube Guinea ngakho nje hhayi ngenye indlela, ake sibone lapho kwazalelwa lezi zilwanyana futhi kungani ayehlasela ezifuywayo. Breeding Guinea izingulube ukwenza baseNdiya eNingizimu Melika, futhi wayesebuyele 7th ekhulwini BC. e. Esikhathini ezweni of the namagundane babebizwa kanjalo ngaleso sikhathi gooey noma aporea. Lokuzaliswa wabo emvelweni kwenzeka phakathi nawo wonke unyaka, ukukhulelwa ihlala kancane kuka izinyanga 2, futhi ngemva kwamahora ambalwa ngemva kokuzalwa zverushka futhi esekulungele ukuzalela! Kungenxa yalesi sizathu ukuthi amaNdiya namagundane ezifuywa, ukuzisebenzisa njengodoti wasendlini ezifuywayo. Sea izingulube wakhonza njengephayona umthombo wabo oyinhloko inyama, kodwa benza imihlatshelo futhi esetshenziselwa eminye imicikilisho yokusebenzelana efanayo. By endleleni, namanje emazweni athile, laba namagundane adle futhi abaseMexico kanye alethwe lokhu zohlobo enkulu kakhulu ingulube Guinea, yena enesisindo esingaba 2.5 kg. EYurophu lehla ngokushesha inani base lokuqala alethwe ngekhulu le-16, kuphela namagundane izindleko ibiza kakhulu, hhayi wonke umuntu ayenamandla okukwenza ukudlala nezilwane ezihlekisayo.
Kungani ingulube Guinea - ingulube. Le nguqulo yokuqala
Yebo, kule ndaba kukhona izinguqulo eziningana. Omunye wabo uthi lapho abaseSpain kuqala wafika eNingizimu neMelika nowabona lezi namagundane, basuke okuningi wawungathi amachwane. Ngakho-ke ngaphandle kokungabaza waqala ukudla. Phela, uma sihlolisise ingulube Guinea, singabona ezinye izici ezifanayo kanye nezilwane ephezulu. Ngokwesibonelo, ezifana imilenze esifushane, kahle ekhanda esikhulu phezu entanyeni esifushane, umzimba kwakhahlela.
Ngokusho kweminye imithombo, inguqulo elandelayo kungani ingulube Guinea - ingulube, wabonakala ngenxa ukuziphatha isilwane. Iqiniso liwukuthi lapho igundane is Yekani ukubanga umsindo, ufuna adle into Angenelisekile kakhulu noma, kunalokho, futhi ukahle, ojabulela ukubona inkosi yakhe, wenza umsindo eyinqaba afana pohryukivanie noma yelps. Ngumuphi ngokubona kwakho kulaba izinguqulo ezimbili kuyiqiniso, akekho owaziyo. Singasho sithi into eyodwa kuphela - neyasemhlabeni kuya iSpanishi ingulube Guinea. Kungani kuthiwa isilwane, sizothola ukuthi, kodwa hhayi ngokuphelele. It uhlala ukuthola ukuthi kungani ingulube olwandle.
Kulesi senzakalo, kukhona kucatshangwa ukuthi e-Europe idatha namagundane ukusabalala usuke entshonalanga uye empumalanga, futhi igama okukhona namuhla ezweni lethu, ibonisa ukuthi izilwane kwalethwa emikhunjini elalivela phesheya, okungukuthi, kusukela ekuqaleni ingulube kwezilwandle. Lezi zilwane cute little ukuthi kukhona linesizotha okuqukethwe kanye nokudla futhi baqeqeshwe kalula, baba abangane ozithandayo amatilosi. Futhi eqinisweni, Guinea izingulube awukwazi ukubekezelela amanzi, ngakho ungazami ukufundisa isilwane sakho ukubhukuda, wamane waminza.
Enye imfihlakalo enkulu
Guinea ingulube - njengoba ngesiNgisi nje ibizwa ngokuthi ingulube Guinea. Futhi mayelana nokuhunyushwa, kukhona izinguqulo ezimbili. Ngokusho kwenye hypothesis, Critter elibizwa elihunyushwe ngokuthi "Guinea" ngoba ngesiNgisi. Guinea - Guinea. Mhlawumbe kwakhiwa le nguqulo is ngenxa yokuthi ayilungile ukuthi Afrika Guinea - lapho kudabuka khona Guinea izingulube. Ngokusho version yesibili, lapho izilwane kwalethwa eYurophu, zibiza kakhulu, ngokulandelana, kungakho (mhlawumbe) kwafika ingulube igama Guinea -. «Ingulube Guinea i" Le ntengo yayiphezulu ngoba iningi labantu. Kunzima makudle esinye salezi izinguqulo. Nokho, noma kunjalo, izilwane Namanje ukukhokha intengo ezintsha ukuphayona.
Sonke wazama ukuthola ukuthi kungani ingulube Guinea - ingulube, wamuka igama. Ngokufanayo, singasho into eyodwa - uma ukuthenga isilwane esinjalo ke eziningi imizwelo eyakhayo usuke okuqinisekisiwe. Phila Guinea izingulube ekhaya yezinyoni okungcono ephakemeyo ikhanzi, futhi ingasetshenziswa njengendlela zokulala sawdust, hay noma excipients ethize zidayiswa ezitolo ethize. Zidla on namagundane ujabule utshani, utshani obomisiwe, okusanhlamvu izitshalo. Isimo esibaluleke kakhulu ukuphila kwabo okuvamile - eliningi ezanele ngamanzi acwebileyo okuphuza, okungcono nge ukwengeza vitamin C odingekayo ngosuku Ngokuvamile, izilwane aphumayo, yonke into eziyibonayo, smart. Ezinsukwini ezimbalwa nje bazakutjheja igama, futhi bakwazi ukulala buthule ezandleni zakho. Bayoba samanje, futhi ilungu egcwele nomndeni wakho.
Izinja Amaphoyisa: zohlobo, ukuqeqeshwa, isithumbanja izinja Interior Ministry olusemthethweni
Amazinyo okufakelwa - incazelo kanye isicelo
IsiZulu - kuyini. Imithi ejwayelekile: ithebula
Wamafutha "Pulmeks Baby": izici kanye nemiyalelo